ကရင်မိန်းကလေးငယ် ဆေးကုစရိတ် ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ယူမည် | ဧရာဝတီ
ကရင်မိန်းကလေးငယ် ဆေးကုစရိတ် ထိုင်းအစိုးရ တာဝန်ယူမည်
သန်းထိုက်ဦး| February 21, 2013 | Hits:18,363
| | ကရင်အမျိုးသမီးငယ် ၏ ဒဏ်ရာများကို ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့ Rama Thibodi ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများက မိနစ် ၃၀ ခန့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် သတင်းစာလင်းရှင်းပွဲတွင် ပြသနေစဉ်(ဓာတ်ပုံ – dailynews)
ထိုင်း လုပ်ငန်းရှင် လင်းမယား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံထားရသည့် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် ကရင် အမျိုးသမီးငယ်ကို ထိုင်း အစိုးရက ကုန်ကျစရိတ် တာဝန်ယူပြီး ဆေးဝါး ကုသပေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
ကရင် အမျိုးသမီးငယ်နှင့် အတွက် ကုန်ကျငွေများကို ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူနှင့် ထိုင်း အစိုးရ ပူးပေါင်းပြီး ပုံမှန် အခြေအနေသို့ ပြန် ရောက်သည်အထိ တာဝန်ယူပေးမည်ဟု ထိုင်း အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ Thossa porn Serirakက ပြော သည်။
ထို ကရင်အမျိုးသမီးငယ် ၏ ဒဏ်ရာများကို ယမန်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့ Rama Thibodi ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများက မိနစ် ၃၀ ခန့် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် သတင်းစာလင်းရှင်းပွဲတွင် ဒေါက်တာ Thossa porn Serirak က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
“သတင်းတွေ ထုတ်လွှင့်နေကြတဲ့ အတိုင်းကလေးငယ် နှိပ်စက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ တကိုယ်လုံးပဲ၊ ဒါကြောင့် ကလေးငယ် နဲ့ သက် ဆိုင်တဲ့ အာဏာပိုင်တွေကို အသိပေးပြီး ဆေးရုံကို ခေါ်လာတာ ဖြစ်တယ်၊ ဆေးဝါး ကုသစရိတ်တွေ အားလုံးကိုလည်း ပုံမှန် ပြန်ဖြစ် တဲ့ အထိ ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်”ဟုလည်း ဒေါက်တာ Thossa porn Serirakက ပြောဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသမီးငယ်၏ ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံးတွင် အပူလောင် ဒဏ်ရာ အမာရွတ်များ ပြင်ထန်စွာရရှိ၍ အပူလောင် ဒဏ်ရာကြောင့် အရေးပြားများ ပျက်စီးပြီး လက်နှစ်ဘက်စလုံး လက်မောင်းရင်း အထိ အရေးပြားများ တွဲဆက်သွားကာ လက်မမြှောက်နိုင်သည် အထိ ဖြစ်နေကြောင်း ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီးများက ပြောသည်။
“ဘယ်ဘက်လက်ကို အရင်ဆုံး ခွဲစိတ် ကုသရမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး တပတ်လောက် အချိန်ယူရမယ်၊ ပုံမှန်ပြန် ဖြစ်အောင် အသားတွေ အစားထိုး ကုသရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခွဲစိတ် ကုသဖို့ အချိန်ကတော့ ၃-၄ နာရီ လောက်ကြာမယ်”ဟု အဆိုပါ ဆေးရုံမှ ဆရာဝန် တဦးက ပြောပြသည်။
ထိုင်းသတင်းများအရ လတ်တလော၌ ကရင်အမျိုးသမီးငယ်ကို ကန်ဖယ်ဖက်မြို့ရှိ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာတွင် ပြန် လည် ပို့ဆောင် စောင့်ရှောက်ထားပြီး၎င်း၏ အမှုတွဲ ပြီးပါက ဆေးရုံသို့ ထပ်မံသွားရောက် ကုသရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရ သည်။
အချိန်ယူပြီး ကုသပေးသွားမှာ ဖြစ်သလို ဆေးမကုသခင်မှာလည်း ကလေးငယ်၏ စိတ်ပုံမှန် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။
ကရင် အမျိုးသမီး ငယ်ကို အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ် ထိုင်း အမျိုးသားနှင့် အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ်ရှိ ထိုင်း အမျိုးသမီး လင်မယားက အိမ်တွင်း အခိုင်းအစေအဖြစ် ၅ နှစ်ကျော်ကြာ ပိတ်လှောင်ထားပြီး ခွေးလှောင်အိမ်အတွင်း ထည့်ထားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ ရေနွေး ပူဖြင့် ပက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်၍ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလောတွင် တရားရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သော ထိုင်းအလုပ်ရှင် လင်းမယားမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပြီး ဖမ်းဆီးပေးသူအား ထိုင်း ဘတ်ငွေ တသိန်း ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆုငွေ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါ ထိုင်းလင်မယားသည် အာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့က ချိန်းဆိုထားရာမှ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာအစိုးရ အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်ထွန်းကမူ“မြန်မာတွေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမှန်သမျှမှာ ထိုင်းတွေက သွေးအေးအောင် လုပ်ပြီးတော့ မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် ဖြစ်အောင် လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်”ဟု ဧရာဝတီ သို့ ပြောသည်။
ကရင်အမျိုးသမီးငယ်၏ အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိုအလုပ်ရှင် လင်မယားကို အသက်မပြည့်သူအား အဓမ္မ ခိုင်းစေမှု၊ လူကုန် ကူးမှု၊ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုတို့ အပါအဝင် စွဲချက် ၇ချက် ဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က ဝရမ်းထုတ်ကာ ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း စွဲချက်များကို ငြင်းပယ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်း အာဏာ ပိုင်များက ဘတ်ငွေ ၇ သိန်း အာမခံဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သား ယောင်္ကျားလေးများ ထိန်းကျောင်းခြင်းဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့ရန် ထိုင်းအစိုးရ အစီအစဉ် မရှိသေးစိတ်ဉာဏ်ရည် မြင့်မားသူတို့ အနာဂတ်သစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မစ္စ ယင်းလတ်တို့ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီနွမ်းပါးသည့် ကလေးငယ်များ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးပွဲ နန်းခင်ဇေယျာ ပါဝင်ကူညီ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> ရာဇာ February 21, 2013 - 9:01 pm	အာမခံ ပေးထားတဲ့ သူတွေ ဖမ်းလိုက်ပေါ့..ရှင်းရှင်း လေးရယ်…
Reply	မျိုးချစ် February 22, 2013 - 7:38 pm	တော်တော်လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ မြန်မာတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ စိတ်ဓါတ်ကတော့ အဲဒီလောက်ထိ အောက်တန်းကျသူမရှိတာတော့ သေချာတယ်။ တော်တော့်ကို ယုတ်ညံ့စုတ်ပြတ်တဲ့လုပ်ရပ်ပဲ။ ထိုင်းမဟုတ်ဘူး ယိုးဒယားကိုသွားပြီးကျွန်ခံပြီး ငွေရှာချင်သူတွေ သတိထားကြ။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလဲ ၀င်ငွေထွက်ငွေတိုင်းတာပြီးသုံးစွဲနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်စိတ်တွေဖျောက်သင့်နေပြီလို့ ပြောလိုက်ပြီဟေ့——
Reply	soe win February 25, 2013 - 10:14 am	thail people pretend they are extremely polite nice and modest … in their mind most thai people are wicked very jealous , especially they are evil …. believe it or not ! most people from burma who come to work in thailand suffer from the brutality and wickedness of thai people ….alot of karen girl life and shame are gone because of the the inhumane thai people .. as thailand isaprostitute country theirr mind is like prostitutes .. they are very low standard .. as their life is damaged they try to destroy the karen girls life and some do the suicide for their life and shame ….. Reply	sartit March 2, 2013 - 1:50 am	မျိုးချစ်ဆိုတဲ့အစ်ကိုရေးထားတာ တော်တော်မျိုးချစ်ပုံရတယ်